ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: July 2009
USB port ပါ ပါတယ် နော်....
Labels: general knowledge:, ko zaw's blog
မော်ဒန် (ဟာလေ) ငမိုးရိပ်ပေါ.နော်...
ကြက်ဥအတုများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ကြက်ဥအတုများ နယ်စပ်မှ တဆင့် ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်လျှက်ရှိကြောင်း မြန်မာ့ရုပ်မြင်က ယနေ့ ကြေညာသွားသည်။
ဓာတုဗေဒနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြက်ဥအတုသည် အရောင်အားဖြင့် ပိုရင့်ပြီး အနှစ်နှင့် အကာတို့ ရောပြွမ်းနေသည်ဟု ယနေ့ည (၈) နာရီအချိန်က ကြေညာသွားသော နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းတွင် ပါရှိသည်။
လူကို အဟာရ မဖြစ်စေသော ကြက်ဥအတုကို တွေ့လျှင် အာဏာပိုင်များကို သတင်းပေးပို့ရန်လည်း ပါရှိသည်။
ကြက်ဥအတုများမှာ အထူးသဖြင့် မွေးမြူရေးကြက်ဥများနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တူပြီး အပေါ်ယံကြည့်ရုံမျှဖြင့် ခွဲခြားမရနိုင်ကြောင်းနှင့် ထိုကြက်ဥအတုကို ဓာတုဗေးနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ကြက်ဥအတု၏ အကာပိုင်းပြုလုပ်ရာတွင် ဘင်ဇိုရစ်အက်စစ်၊ ဂျယ်လီ၊ အမည်မသိဓာတုဆေးမှုန့်၊ ကော်ရည်ပြုလုပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည့် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် မုန့်ဖုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဓာတုပေါင်ဒါများဖြင့် ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကြက်ဥအတု၏ အနှစ်ပိုင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အမည်မသိ အဝါရောင်ပေါင်ဒါမှုန့်အား အရည်တမျိုးဖြင့် သမအောင် မွှေကာ ကယ်လ်ဆီယမ်ကလိုရိုက်ဒ် ထည့်သွင်းဖျော်စပ်ထားသည့် Magic Water ခေါ် အရည်တမျိုးဖြင့် ရောစပ်ပြုလုပ်သည်။
အကာနှင့် အနှစ်ကို အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည့် ပလတ်စတစ်ပုံသွင်းခွက်ထဲသို့ လောင်းထည့်ကာ ပုံသွင်းရကြောင်းနှင့် ကြက်ဥအကာနှင့် အနှစ်တို့အကြား ရောနှောသွားခြင်းမရှိစေရန် Magic Water က ပါးလွှာသော အမြှေးပါးအသွင်ဖြင့် ပိုင်းခြားပေးထားသည်။
ကြက်ဥအခွံကိုမူ ပါရာဖင်းဓာတ်ပါဝင်သော ဖယောင်းနှင့် အမည်မသိ အဖြူရောင် ဓာတုဆေးရည်တမျိုးတို့ ရောစပ်ပြုလုပ်ပြီး ၎င်းအရည်ကို အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ထားသော ပလတ်စတစ်ပုံစံခွက်အတွင်း ထည့်ထားသည့် အနှစ်အတုနှင့် အကာအတုများပေါ်သို့လောင်းချ၍ အချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင် အခြောက်ခံထားပါက ကြက်ဥအစစ်နှင့် ထပ်တူထပ်မျှ အသွင်သဏ္ဍာန်တူသော ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကြက်ဥအတုကို ရရှိသည်။
ကြက်ဥအတုတွင် လူကို အဟာရဖြစ်စေမည့် ပရိုတိန်း စသည့် ဓာတ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် ပါဝင်သော ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့် ၎င်းအား စားသုံးပါက ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ဆေးပညာရှင်များက သတိပေးထားသည်။ ၎င်းကြက်ဥအတုများမှာ နယ်စပ်ဒေသများမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသရှိ ဒေသဈေးကွက်အချို့သို့ ဝင်ရောက်နေသဖြင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် သတိပြု ဝယ်ယူစားသုံးကြရန်လိုသည်။
ဝယ်ယူစားသုံးသူများအနေဖြင့် ကြက်ဥအတုနှင့် အစစ်ကို ခွဲခြားရန်မှာ ကြက်ဥအတုကိုကိုင်၍ ခပ်ပြင်းပြင်း လှုပ်ကြည့်ပါက အဆံချောင်နေသည်ကို တွေ့ရပြီး ကြက်ဥအစစ်ကိုကိုင်၍ ခပ်ပြင်းပြင်း လှုပ်ကြည့်ပါကမူ အဆံချောင်းခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကြက်ဥအတုနှင့် အစစ်ကိုယှဉ်၍ မှန်၊ ဇလုံ၊ ပန်းကန်တခုခုပေါ်တွင် တင်၍ လှည့်ကြည့်ပါက အတုက ဂျင်လည်သကဲ့သို့ မွှတ်နေအောင် လည်ပတ်နှုန်းမြန်ပြီး လည်ပတ်ချိန် ပိုကြာသည်။
ကြက်ဥအတုနှင့် အစစ်ကို ယှဉ်ကြည့်ပါက အတု၏အရောင်က ပိုရင့်ကြောင်းနှင့် အတု၏ အခွံသည် ဖယောင်းနှင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ပိုမိုအလင်းပြန်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကြက်ဥများကို ပွတ်ကြည့်လျှင် အတု၏ အခွံမျက်နှာပြင်က ပို၍ကြမ်းကြောင်းနှင့် ကြက်ဥကိုခွဲ၍ ကြည့်မည်ဆိုပါက အတု၏ အနှစ်နှင့်အကာသည် သီးသန့်မနေဘဲ ရော၍သွားကြောင်း တွေ့ရပြန်သည်။ အတု၏အခွံ၌ အမြှေးမပါဘဲ အစစ်၌သာ အမြှေးပါသည်။ ပြုတ်လိုက်ပါကလည်း အတုသည် အစစ်ကဲ့သို့ အနှစ်နှင့်အကာ သီးခြားမနေဘဲ ရော၌သွားသည်။
ဟောဒါ အတုပါတဲ. .....
Posted by Unknown | at 1:11 AM |0comments
Labels: news: Mizzima
တဲ.သတင်းလေးဖတ်ရပြီးတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာလည်းတစ္တေမှင်
တရားစွဲခံရသည်.တစ္ဆေ ဆိုဒါဒီလိုမျိူးလေလား ...
မှင်စာအား ၄င်တို.မိသားစုပိုင်ပစ္စည်းများအားခိုးယူမှု၊ မိသားစုဝင်များအားစိတ်ခြောက်ချားအောင်ပြု
မိုဘိုင်းဖုံးများအားခိုးယူခြင်း ( ခေတ်သစ် အိုင်တီ တစ္ဆေဖြစ်ရမယ် ) ညဘက်တွင်၎င်းတို.၏အိမ်အား
ကျောက်ခဲများဖြင်.ပစ်ပေါက်ခြင်းတို.ဖြင်.စွပ်စွဲထားကြောင်း Al- Watan သတင်းစာ ၏အဆိုအရသိရှိ
တရားရုံးအကြီးအကဲ Sheik Amr Al Salmi က ကျွန်တော်တို.အနေနဲ.အဲဒီကိစ္စအဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်
ဖို.အတွက်ဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲတွေတွေ.ရပေမယ်.ကြိုးစားကြရမှာပါ လို. သတင်းစာတိုက်ကို
ခဲ.တာမဟုတ်ပါဘူး.... မိသားစုဝင်အားလုံးတိုင်းဟာဒီအမှုမှာပါဝင်နေလို.ပါပဲ " လို.သူကဆိုပါတယ်...
အစ္စလာမ်အာသာအရမြင်.မြတ်သည်.ဘာသာရေးမြို.တော် Medina မြို.အနီးရှိအဆိုပါနေအိမ်တွင်
၄င်းမိသားစုနေထိုင်လာခဲ.သည်မှာ ၁၅ နှစ်မျှကြာခဲ.ပေမယ်.လွန်ခဲ.သည်.နှစ်နှစ်ကမှအဆိုပါတစ္ဆေ
" ထူးထူးခြားခြားအသံတွေစပြီးကြားခဲ.ရတာပါ။ပထမတော.အမှုမဲ.အမှတ်မဲ.ပေါ. ...နောက်တော.
တော.ကလေးတွေကတစ်ကယ်ပဲကြောက်လန်.လာကြပါတယ် " လို.မိသားစုအကြီးအကဲကသတင်း
ထိုတစ္ဆေသူရဲများအကြောင်းကိုအစ္စလာမ်ကိုရမ်ကျမ်းတွင်သာမက အစ္စလာမ်ဘာသာမပေါ်မှီက
ရေးခဲ.သော "အာရေဗီယံညများ" ပုံပြင်ဝတ္တုစာအုပ်တွင်ပါထည်.သွင်းရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။
ပြည်နတ်နန်းမှငြင်းပယ်မောင်းထုတ်ခံရပြီး ( Shaitan ) တစ္ဆေ ဟုခေါ်တွင်ကြကြောင်းသိရ
Posted by Unknown | at 11:14 AM |0comments
Labels: general knowledge: source:asiaone
တရုတ်နိုင်ငံချင်ဟိုင်ပြည်နယ်၊ထောင်ရင်းမြို.ကအသက် ၇၀ ရှိတိဗက်ဘုန်းတော်ကြီးဟွာချီ ဟာ
ပထမဦးဆုံးနှစ်များမှာဆိုယင်ဘုန်းတော်ကြီးဟာတစ်နေ.ကိုအကြိမ် ၂၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ အထိဝတ်
သူသီတင်းသုံးနေတဲ.တိဗက်ဘုန်းကြီးကျောင်းဟာနှစ်ပေါင်း ၁၃၀၁ နှစ်သက်တမ်းတိုင်ခဲ.ပြီဖြစ်
Onagood day Hua Chi manages 1,000 prayers. Onabad one he can only stretch to 500
There are few people who have made their mark on life quite like monk Hua Chi.
He has knelt to pray so many times that his footprints remain deeply, perfectly ingrained on his temple's wooden floor.
Hua, who is about 70, has been performingastrict daily ritual at the site in the monastery town of Tongren, in Qinghai province, China, for nearly 20 years.
The footprints are 1.2 inches deep where the balls of his feet have pressed into the wood.
'During the first years I would pray 2,000 to 3,000 timesaday.
'But I have grown older, so in recent years I have only done around 1,000 each day,' he said, adding sheepishly that he could sometimes only manage around 500 in the cold of winter.
who is alsoadoctor of traditional medicine, hopes his dedication will take him closer to his goal -asmooth transition to the afterlife.
'I reconstructed this temple and have prayed and walked around the temple all these times so that after my death my spirit will not suffer,' he said.
Hua's devotion has not gone unnoticed by younger monks at the temple, which lies within the Rongwo Gonchen Gompa, Tongren's main Tibetan monastery.
Twenty-nine-year-old Genden Darji says he spent many days admiring Hua's efforts before finding the courage to step into his footprints.
As he carefully repeats Hua's movements, the young monk says he plans to carry on the ritual when the older monk stops.
'Every day I come here and every day I look at the piece of wood, and it has inspired me to continue to make the footprints myself,' he said.
Posted by Unknown | at 1:32 AM |2comments
Labels: News : Dailymail
Man Ostracised , Fine for Voting
ရူပီး ၁၅၀၀၀ပေးဆောင်စေခြင်းခံခဲ.ရပါတယ်.... သူတို.ဒေသဖွံ.ဖြိုးရေးအတွက်ဘာမှ
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိကူးမားဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံပတ္တနားပြည်နယ်ကနေကီလိုမီတာ ၁၀၀ကွာ
ဝေးတဲ. နာလန္ဒာဒေသက ဒါဟာရာ၊ ဒေါပါး ၊ အီနာရတ္တပူ ဆိုတဲ.ရွာအုပ်စုသုံးရွာထဲက ဒေါပါး
A man has been ostracised and fined Rs 15,000 for exercising his right to vote in
Bihar's Nalanda constituency. His neighbours boycotted the poll on Thursday to
protest lack of development.
Chinis Kumar, in his 30s , was the only voter who exercised his franchise during
Thursday's polling despiteapoll boycott call in three villages of Dharhara,
Daudpur and Inayatpur in Nalanda, about 100km from state capital Patna.Kumar,
a resident of Daudpur, angered the villagers by voting during the Lok Sabha
elections. Voters of three villages issuedapoll boycott protesting against " non-
development " in their villages.
"He ( Kumar ) was ostracised andafine was imposed on him for going against
collective dicision of three villages to voycott the polls," said Mukesh Prasad,
This was the first reported case in Bihar whenaman was ostracised and fined
for defyingapoll boycott call.
According to poll officials, voters issuedapoll boycott at 22 polling stations
to protest against the lack of development in their villages in Nalanda district,
the home turf of Chief Minister Nitish Kumar.
Posted by Unknown | at 12:49 AM |0comments
Labels: news : Khaleej Times
အခုလည်းလွန်ခဲ.တဲ.မတ်လ ၁၁ ရက်နေ.ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကအသက်ခြောက်နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်
မှာရှိတဲ. ၅ ပေအရှည်သံချောင်းတစ်ခုကသူ.ဗိုက်ကိုဟိုဖက်ဒီဖက်ထုတ်ချင်းပေါက်ပြီးဝင်သွားခဲ.ပါတယ်...
Last week on March 11, 2009, India celebrated Holi, the Festival of Colors, where people run around all day throwing colored powder and liquids on each other.
Mihir Kumar,a6 year-old boy, climbed up onaconstruction site’s roof to getabetter view and watch the celebration.
The boy lost his footing and fell, landing ona5 foot iron rod, which pierced his stomach.
Mihir was taken immediately to the hospital, where the rod was removed.
Doctors said it wasamiracle that no critical organs were damaged and the boy was lucky to be alive.
Maybe next Holi, Mihir will stick to throwing colors at his friends and avoid climbing onto any rooftops.
Posted by Unknown | at 3:58 AM | 1 comments
Labels: news : asia news
နေကာမျက်မှန်လေးနဲ. ...ခွေးကလေးရယ် ...ယဉ်ပါတယ်...
ထင်ပါတယ် " ခွေးပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်...
အခုတော.ခွေးကလေး ဖေးဖေ ဟာအမိုက်ဆုံး၊အပျံစားခွေးအဖြစ်သွားလေရာမှာလူတိုင်းက
Fei Fei now attracts attention wherever he goes - as the coolest dog in the city, reports the Wuzhou Daily.
Posted by Unknown | at 3:33 AM |0comments
ပြာတို.အတွက်ငါးထောင်ပေးရတယ်၊ ထုံဆေးဖိုးကနှစ်ထောင်ပေးရတယ်၊ ပြင်ပကနေ၀ယ်ရတဲ.
ဆေးဖိုးက သုံးသောင်းခွဲလေးသောင်းရှိတယ်၊ ပြီးတော.ဆရာဝန်တွေကိုကျွေးရတာတွေဘာတွေ
နဲ.ပေါင်းရင်လူနာကပေးရတာတစ်သိန်းခွဲသာသာလောက်ရှိပါတယ် " လို.လူနာတစ်ဦးကပြော
တယ်။ ဓါတ်မီးတွေဆောင်ထားဆိုလို.လေးငါးခြောက်လက်လည်းစုထားရတယ်။ ဘာလုပ်ဖို.လဲဆို
ပဲ " လို.ပြောပါတယ်...
ဒီသတင်းမှမထူးယင်ဘယ်သတင်းထူးဦးမလဲနော်...ငွေတစ်သိန်းခွဲ ( ဒေါ်လာတစ်ရာ.သုံးလေး
ဆယ် ) ဟာနိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသူတွေအတွက်မပြောပလောက်ပေမယ်.၀င်ငွေနည်းပါး
Posted by Unknown | at 12:23 AM |0comments
Labels: news : RFA
Posted by Unknown | at 11:50 PM |0comments
Labels: news: New Light of Myanmar
၂၀၀၉ ခုနှစ်မေလမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံဝေလပြည်တောင်ပိုင်းမှာနေတဲ.အသက် ၃၆ နှစ်ရှိကလေးသုံး
လံတင်ရောင်းလိုက်တာဒေါ်လာနှစ်သောင်းရှစ်ထောင် ရသွားပါတယ်တဲ. ....သူမဟာတစ်ဝက်တစ်
ပျက်စားထားတဲ.အဲ.ဒီပေါင်မုန်.မီးကင်ချပ်ကို ၁၀ နှစ်ကျော်အောင်သိမ်းထားတာတောင်အံ.သြထူး
ပြီးပယ်ဖျက်ခဲ.ပါတယ်တဲ. ( ဘယ်သူကတရားမ၀င်ဘူးပြောပြီးပယ်တာလဲမသိပါ...) တရားဝင်အမြင်.
ဆုံးပေးခဲ.တဲ.ဈေးက ၇၁ ဒေါ်လာပါတဲ. ....
၂၀၀၅ ခုနှစ်ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ.မှာတော. Pittsburgh မြို.သား ဂျက်ဖရီ ရီဂို ရဲ.နေအိမ်မှာခရစ်တော်
ယေရှုပုံကိုတွေ.မြင်ခဲ.၇ပါသေးတယ်...အဲဒီနေ.ကရေချိူးခန်းထဲကထွက်လာ ဂျက်ဖရီဟာ " အလို !!
ဘုရားသခင် !!!! " လို.အလန်.တစ်ကြားဟစ်အော်လိုက်တာကိုသူ.ရည်းစားကဘာဖြစ်တာလဲလို.လှမ်း
ဘုရားသားတော်ခရစ်တော်ရဲ.ပုံရိပ် ဆိုပြီးလေလံတင်ရောင်းလိုက်တာဒေါ်လာ နှစ်ထောင်ရလိုက်
မျက်ရည်ကျပြီးငိုနေတဲ.ပုံလို.ထင်ရပါတယ်တဲ. ....( သြော် ...ဒါကြောင်.ကိုး ....)
In 2008, an unexplained image inahospital prayer garden window of Orlando, Florida, moved some people to tears and drew groups of people toahallway before vanishing. A crowd inside the Florida Hospital Medical Complex snapped photos of the image apparently showing the profile of Jesus Christ crying. (Source)
In Arizona,apatient atadentist's office saw Jesus on an X-ray. The dentist, and staff that the X-ray contains an image resembling Jesus.
၂၀၀၆ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော. ဓါတ်ပုံအနုပညာရှင် ဂျက်စီကာဝှိုက်ရဲ.ခွေးကလေး Angus
MacDougall ရဲ. အင်း .....ကြံကြံဖန်ဖန် (ခွေး) ဖင်မှာခရစ်တော်ရဲ.ပုံပေါ်နေပါသတဲ. ...
သြော် ...ပေါ်စရာရှားလို. ခရစ်တော်ရယ်...
၂၀၀၉ ခုနှစ်ဧပြီလ ကလည်းဘာသာရေးဆိုင်ရာထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေတွေ.ရတာကိုတင်တဲ.၀က်ဘ်
Michael Cartwright, 35, and his friends were certainly amazed at the image they saw in the foil wrapping of his bottle of cider.
The Daily Mail reported that Mr Cartwright "got goosepimples" when he noticed what seemed to be the face of Jesus at the top of his bottle of Bulmer's.
The group spotted the face while drinking at their local the Tanners Hall, and one of Mr Cartwright's friends immediately tookapicture of the face on the drink.
It wasn't until viewing the pictures the next morning that Mr Cartwright,ataxi driver, realised how clear the image was.
But the "miraculous" find had been thrown away byabarmaid before the end of the evening.
Mr Cartwright said: "It ended up getting collected byabarmaid when no one was paying attention and thrown away.
"I'm not sure what message Jesus was sending and maybe now we'll never know," the paper reported.
Mr Cartwright could even have madeahefty profit on the £2.49 cider bottle.
In 2004,aFlorida woman made £15,000 after sellingatoasted cheese sandwich that appeared to show the face of the Virgin Mary on internet auction site eBay.
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် က Clearwater ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦရဲ.မှန်နံရံ
လိုတာထင်ပါတယ်...၂၀၀၄ ခုနှစ်မေလ မှာတော.အဲဒီမှန်ချပ်တွေဟာလူရမ်းကားတွေလက် ချက်နဲ.
The finder told Dutch news site NU.nl: "I was amazed. I just tookabite and then I saw the face of Christ in it."
But we think it'saKitKat Senses-ation.
Posted by Unknown | at 2:24 PM | 1 comments
Labels: News Article :
Tasty if you can stomach heights
Appetite ataheight ... Dinner In The Sky in Amiens
Very haute cuisine ... waiters serve at 160ft
ပြင်သစ်နိုင်ငံ Amien မြို.တွင်ဝေဟင်ထဲကစားသောက်ဆိုင်ဟုအမည်ပေးထားသောမြေပြင်မှပေပေါင်း
အသည်းကောင်းသူများသာသုံးဆောင်နိုင်မည်.အဆိုပါ မိုးမြင်. ကစားတော်ဆက်ရဲ.ဈေးနှုံးကလည်းမသေး
လှပါဘူး ....အင်္ဂလန်နိုင်ငံသုံးငွေ ပေါင် ၁၃၀၀၀ (ဒေါ်လာနှစ်သောင်းကျော်ပေါ.နော်...) ပါတဲ. ....
ခွက်ယောက်များအောက်ကိုမပြုတ်ကျပါစေနဲ. တဲ. ....
BLIMEY, we're full... up. A group of diners dangle fromacrane and tuck in atatable 160ft in the air.
They were strapped into their chairs and served by waiters andachef in the centre of the six-ton structure.
The Dinner In The Sky service, seen here in Amiens, France, costs up to £13,000. Just don't drop your cutlery.
Posted by Unknown | at 12:51 AM | 1 comments
Labels: Photo news :, The Sun
အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို.မှတိရိစ္ဆာန်များကိုလေ.ကျင်.သင်ကြားပေးနေသည်. Lyssa
Willy အမည်ရှိတဲ.ခွေးမလေးဟာ " ဒိုင်း " ( bang ) ( သေနတ်ပစ်သံ ) ဆိုတဲ.စကားလုံးကိုတွေ.
ယင်လှဲပြီးသေချင်ယောင်ဆောင်ပြပြီး " ဝှေ.ယမ်းပြပါ " ( wave ) ဆိုတဲ.စကားလုံးကိုတွေ.ယင်
ရှေ.လက်ကလေးကိုရှေ.ကိုထုတ်ပြပါတယ်တဲ. ... "ထိုင်ပါ " ဆိုတဲ.စာကိုတွေ.ယင်နောက်ခြေပေါ်
" ဒီခွေးမကလေးဟာမယုံကြည်စရာကောင်းလောက်အောင်တော်တော်ကိုပဲအတတ်မြန် " ပါတယ်
လံရိုက်ကူးပေးနေတဲ.တိရိစ္ဆာန်လေ.ကျင်.ရေးဆရာမ Ms Rosenberg ကပြောပါတယ်...
သူမဟာ(ခွေးမလေးနော်) အမူအရာပေါင်း ၂၅၀ ကိုနားလည်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးကျွန်မကတော.တစ်နေ.
တဲ. ...တစ်နေ.တော. Ms Rosenberg ဟာသူမရဲ.သူငယ်ချင်းတစ်ယောာက်နဲ.အဲဒီခွေးလေးကို
" ကဲ ...အလောင်းအစားမှာကျွန်မနိုင်ခဲ.ပြီမို.ခွေးကလေး Willow ပါမက္ကစီကို ကိုလိုက်ပါနိုင်ခဲ.
ပြီပေါ. " လို.သူမကဆိုပါတယ်...
ခွေးကလေး Willow မှာကိုယ်ပိုင်တိရိစ္ဆာန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရှိပြီး Ms.Rosenberg သူမခင်
ပွန်းရှိရာ Surry ပြည်နယ်၊ Guildford မြို.ကိုသွားတိုင်းအန္တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးလေ
ယာဉ်ခရီးနဲ.အမြဲလိုက်ပါလေ.ရှိပါတယ်တဲ. ...( သြော် ...သူတို.ဆီများကျတော.ခွေးတောင်
ပတ်စပို.နဲ ...ခရီးသွားရသေးပါလားနော်... )
တောင်ခွေးမလေး Willow ကအသိသက်သေအဖြစ်နဲ.လက်ထပ်စာချူပ်မှာရှေ.ခြေထောက်ကို
မှင်နှိပ်ပြီးလက်မှတ်ထိုး၊လက်ဗွေနှိပ်ပေးခဲ.သေးပါသတဲ. ဗျာ...( ကဲ လဲ ကဲ တဲ.စုံတွဲပေပဲ... )
Ms Rosenberg ဟာအလုပ်ကိစ္စနဲ.ခရီးထွက်တိုင်းလဲ ၁၀ ပေါင်သာလေးတဲ.ခွေးမလေး Willow ကိုခေါ်သွားလေ.ရှိပါတယ်တဲ. ... ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော.ခွေးမလေးဟာခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာတစ်ခြားတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ.အတူလိုက်
"တစ်ခါက ကျွန်မ ကာလီဖိုးနီးယားကနေ နယူးယောက်မြို.ကို လေယာဉ်နဲ.ပျံလာခဲ.ရသေးတယ်...
အဲဒီတုံးက ကျွန်မနဲ.အတူ ယုန်တစ်ကောင်ရယ်၊ပူးနှစ်ကောင်ရယ် Willow ရယ်ပေါ. ... လေဆိပ်
လုံခြုံရေးဂိတ်ကိုဖြတ်တော.အိတ်ထဲက ယုန်ရယ်၊ ပူးနှစ်ကောင်ရယ် ၊ Willow ကိုပါထုတ်လိုက်
တော.လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်အထူးအဆန်းရယ်စရာဖြစ်သွားတော.တာပေါ. " လို.သူမက
သြော်...တိရိစ္ဆန်တောင်သင်ပေးရင် စာတောင်ဖတ်ပြီးနာလည်နိုင်သေးတယ်နော်...
Posted by Unknown | at 2:27 AM |0comments
ပိုင်ရှင်ကတော.အာရပ်ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံး၊(ကမ္ဘာ. ၂၂ ယောက်မြောက်အချမ်းသာ
ဆုံး ) လက်ရှိဆော်ဒီအာရေဗျဘုရင်ရဲ.တူ တော်သူ မင်းသားအယ်ဝါလစ်ဘင်တာလယ်
အဲယားဘတ်စ်ကထုတ်တဲ.နောက်ဆုံးပေါ်ကမ္ဘာ.အကြီးဆုံးလူစီးလေယာဉ် A 380 ကိုတောင်
ဒေါ်လာ ၃၁၉ သန်းပါတဲ. ...ပြီးတော.အဲဒီလေယာဉ်ကိုအပျံစားနောက်ဆုံးပေါ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ
နဲ.အလှဆင်မွမ်းမံမှာက ဒေါ်လာ ၁၅၀ သန်းခန်.အကုန်အကျခံဦးမှာပါ....
အခု ဒေါ်လာ ၄ သန်းခွဲပဲရှိတဲ.စိန်စီတဲ.ကားကတော.သူ.အတွက်အသေးအဖွဲပဲဖြစ်မှာပါနော်...
တက်ထိုင်ကြည်.ယင်ဒေါ်လာတစ်ထောင်...၀ယ်မယ်ဆိုယင် ဒေါ်လာ ၄.၆ သန်းတဲ.ဗျာ...
Posted by Unknown | at 11:45 AM |3comments
Posted by Unknown | at 11:11 PM | 1 comments
Saudi family takeagenie to court over theft and ...
Odd Bikes ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီးများ...
Sudan women sentenced to 40 lashes each... for dar...
Whatablast! စီးပွားရေးမကောင်းလို.ကားရေဆေးနေရတဲ....
World's fattest boy, 9, whose mother won't let him...
Pig's deadly kick sends worker into boiling pot
' Bloody Meal ' maid walks free from court
World's pet-only airline launches in the U.S.
World’s Most Luxurious and Expensive Mobile Home
အိုိုဘယ်. သမ္မတ ငယ်...အသင်ဘယ်ကိုကြည်.သနည်း!!!...
The Latest Cycle in Arab Desert
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အတွက်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ တန်အခေါင်း